Lorcaserin (Belviq) पाउडर (616202-92-7) hplc≥98% | AASraw फ्याट घाटा
/ उत्पादन / फैट हानि पाउडर / Lorcaserin (Belviq) पाउडर
दर्जा: SKU: 616202-92-7. श्रेणी: फैट हानि पाउडर
AASraw को लागी संक्रमण र उत्पादन को क्षमता संग ग्रैम ले Lorcaserin (Belviq) पाउडर (616202-92-7) मा ठूलो सीजीएमपी विनियमन र ट्रैक योग्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को अंतर्गत।
एक कुशल र सुरक्षित वजन घटाने औषधी उत्पादन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अतीतका प्रयासहरू धेरै साइड इफेक्टहरू जस्तै दिलको क्षतिको साथ आउँछन्। सौभाग्यवश, एक नयाँ अध्ययन भन्छन् कि लोरस्सेसरको वजन घटाने गोलीले तपाईंलाई आफ्नो हृदयको स्वास्थ्य बलिदान नगरी अतिरिक्त वजन बहाउँदछ। Lorcaserin एक आश्चर्य भूख suppressant गोली हो, जुन 2012 मा एफडीए द्वारा अनुमोदित भएको थियो। तर लोरस्सिन के हो? ठीक छ, तल दबाइ, यसको रासायनिक ढाँचा र गुणहरू, प्रयोगहरू, खुट्टा, सावधानताहरू, र धेरैको गहिरो विवरण हो।
उत्पादन नाम: Lorcaserin / BELVIQ (लोरस्सिन हाइड्रोक्लोराइड)
Lorcaserin (Belviq) पाउडर भिडियो
I.Lorcaserin (Belviq) पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू:
नाम: Lorcaserin (Belviq) पाउडर
आणविक सूत्र: C11H14ClN
आणविक वजन: 195.692
पिघल प्वाइन्ट: 212 ° C
भण्डारण अस्थायी: RT
रंग: सेतो बन्द सेतो पाउडर
तल 3-D रचनामा लोरस्सरिनको रासायनिक संरचना हो।
लेजरसेसरको रासायनिक गुण (belviq) (सीएएस 616202-92-7)
तल संक्षेपको रासायनिक गुण Lorcaserin (belviq) छ; तिनीहरू द्रुत नजरको लागि तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
गुण नाम गुणस्तर
अविवाहित रूपमा बाँधिएको एकाइ गणना 1
आइसोटोप एटम गणना 0
अपरिभाषित बन्ड Stereocenter गणना 0
परिभाषित बन्ड स्टेरेसोन्टर गणना 0
अपरिभाषित एटम Stereocenter गणना 0
परिभाषित एटम Stereocenter गणना 1
भारी एटम गणना 13
औपचारिक शुल्क 0
कम्पाउन्ड क्याननिकिकल हो साँचो
असाधारण जन 195.081 जी / mol
Monoisotopic Mass 195.081 जी / mol
माथिल्लो पोलार सतह क्षेत्र 12 ए ^ 2
Rotatable Bond गणना 0
हाइड्रोजन बन्ड स्वीप्टर गणना 1
हाइड्रोजन बन्ड डोनर गणना 1
आणविक वजन 195.69 जी / mol
Lorcaserin एचसीएल पाउडरको साधारण विवरण
Lorcaserin (Belviq) अरेना फार्मासिटिकल द्वारा बनाईएको एक भूख suppressant गोली हो। यो ड्रग्स को एक वर्ग संग सम्बन्धित छ जो कोरोनिन रिसेप्टर agonists को रूप मा जाना जाता छ। यो कम खाना खाएपछि पूर्णतया महसुस गर्न मद्दत गरिएको हो। यसले 5-HT लाई सक्रिय गरेर भूख दबाउँछ2C रिसेप्टरहरू, जुन भूख नियन्त्रणमा दिमाग (हाइपोथोमलस) को क्षेत्रमा सीरोटोनिन रिसेप्टरहरूको प्रकार हो। जब तिनीहरूले तपाईंको शरीर पूर्ण महसुस गर्न संकेत गर्दछ, तपाईं कम खान पाउनुहुन्छ, यस प्रकार लामो समय मा वजन गुमाउनु।
Belviq, जसको रासायनिक नाम (आर) -8-Chloro-1-मिथाइल-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine hydrochloride hemihydrate छ, orally लगिनेछ गर्न चाहनुभएको छ। यसको आणविक वजन 241.16 जी / mol हो, र यसको अनुभविक सूत्र सी हो11H15Cl2N • 0.5H2ओ. यसको संरचनात्मक सूत्र यहाँ उल्लेखित छ:
पानी मा Lorcaserin हाइड्रोक्लोराइड hemihydrate को घुलनशीलता 400 मिलीग्राम / एमएल भन्दा माथि छ। एक Belviq ट्याब्लेटमा क्रिस्टलीय लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोराइड हेमीहाइड्रेट (सेतो सेतो पाउडर देखिने सेतो पाउडर) को 10.4 मिलिग्राम छ, जुन 10.0 को बराबर एन्ड्रोइड लोरस्सरिन हाइड्रोक्लोराइड को बराबर हुन्छ। यो पनि म्याग्नेशियम स्टियर एनएफ, टेल यूएसपी, एफडी र सी ब्लू #2एल्यूमीनियम झील, टाइटेनियम डाइअक्साइड यूएसपी, पेलिथाइल ग्लाइकोल एनएफ, पिलिविनल शराब यूएसपी, कोलोइडल सिलिकन डाइअक्साइड एनएफ, क्रोस्कोमेलेलोजो सोडियम एनएफ, सिलिक्री माइक्रोक्राइस्टलाइन सेलुलोज र हाइड्रोक्सिप्रोइल सेलुलोज एनएफ सहित अन्य सामग्री समावेश गर्दछ।
Lorcaserin को तंत्र
खाद्य तथा औषधि प्रशासनको डोऱ्याइ मापदंड (2007) अनुसार, Lorcaserin वयस्कों को क्लिनिक सार्थक वजन घटाने लाई प्राप्त गर्न मा मदद गर्न को लागी सक्षम छ। यो वजन घटाने औषधले बढि शारीरिक क्रियाकलाप र कम-क्यालोरी आहार संग जोडीएको राम्रो तरिकाले काम गर्न भनिएको छ। यसले पुरानो वजन व्यवस्थापनको साथमा महत्त्वपूर्ण रूपमा मद्दत गर्न सक्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरु जसको वजन कम हुन्छ (कम से कम 27 किलोग्राम / एम2), वा मोटे (कम से कम 30 किलोग्राम / बीएमआई2)। यो दबाइले ती व्यक्तिहरूलाई एक वा बढी वजन सम्बन्धी समस्याहरू जस्ता प्रकारको मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै टाइप2मधुमेह, डाइस्लिपिपिमेनिया, वा हाइपरटेन्सन।
Lorcaserin एक उपन्यास भूख suppressant गोली हो जुन एक 5-HT को रूपमा चयनशील कार्य गर्दछ2C 5-HT को लागि पन्द्रह गुना बढी आत्मीयता को एक्शन चुनिंदापन संग रिसेप्टर एग्रोनमस2C 5-HT को लागी रिसेप्टर2A र 100-HT को लागि एक5गुना अधिक कार्यात्मक चयनता whopping2C 5-HT को तुलनामा रिसेप्टरहरू2B.
5-HT2C रिसेप्टरहरू प्रायः मानव मस्तिष्कमा अवस्थित हुन्छन् र थामुमस, हाइपोथोमसस, कोर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, चोरोड पेक्सस, सेरिबेलम, र अम्गाडलामा भेट्टाउन सकिन्छ। हाइपोथोममसमा 5-HT2C रिसेप्टरहरूको उत्तेजना POMC (प्रोपोओमोलेनोकर्टिन) उत्पादन गर्दछ र यसकारण थोरै कमजोरीको माध्यमबाट वजन घटाउन बढाउँछ। यो तर्कलाई क्लिनिक परीक्षण र अन्य अनुसन्धान अध्ययनहरू प्रमाणित गरी समर्थित छ। जबकि यो सामान्यतया सोचा छ कि 5-HT2C रिसेप्टरहरू भूख, ईन्कोड्रेन्स स्राव र मूड विनियमित गर्न मद्दत गर्दछ, भूख नियमनमा कार्यको सही मोड जान्दैन।
रिसेप्टर EC50 [एन एम] Ki[एन एम]
Lorcaserin एचसीएल पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्
यदि हामी वास्तविक Lorcaserin त्यहाँ त्यहाँ समीक्षाहरू विचार गरौं भने, यो शायद आज बजार मा सर्वश्रेष्ठ वजन घटाने गोली हो। केहि अधिक वजन वाला व्यक्ति, यानी, जो वजन-सम्बन्धित मेडिकल सर्तहरू वा मोटे भएका छन् ती उत्पादहरू यस उत्पादनबाट निकै लाभ उठाउन सक्छन्।
एक डाक्टर-अनुमोदित कसरत कार्यक्रम, कम क्यालोरी आहार कार्यक्रम, र जीवन शैली परिवर्तन संयोजनमा प्रयोग गर्दा, Lorcaserin बस वजन भन्दा एक धेरै अधिक गर्न मद्दत गर्न सक्छ - यो मोटोपना सम्बन्धित छन् भनेर धेरै स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ सहित उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, र प्रारम्भिक मृत्यु।
केन्द्र नियन्त्रण केन्द्रको अनुसार, कुल शरीरको वजनको5प्रतिशतमा 10 लाई हराएर केही रक्त लाभहरू जस्तै रक्त शर्करा, रक्त कोलेस्ट्रल र रक्तचापमा सुधार हुन सक्छ।
Lorcaserin एचसीएल पाउडर को खुराक
वयस्कहरू प्रति दिन दुईवटा गोलहरू मानिन्छ। त्यसैले तपाईले प्रति महिना 60 गोलहरू लिन आवश्यक छ। एफडीए अनुसार, एक स्वस्थ वजन को बनाए राख्न को लागी एक को उनको बाकी / उनको जीवन को समयमा दबाइ को उपयोग गर्न को लागी चाहिए।
नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि सकारात्मक परिणामहरू 12 हप्ता पछि देखा पर्नुपर्दछ। यदि तपाईं कम से कम आफ्नो बेसलाइन शरीर को वजन को5प्रतिशत नहीं खो पाएंगे, तपाईंलाई गोली को उपयोग रोक्न को लागि सल्लाह दिइएको छ। समेत निरन्तर उपयोगको साथ, यो कम संभावना छ कि तपाईं क्लिनिक रूपमा सार्थक वजन घटाने प्राप्त र निरन्तरता पाउनुहुनेछ।
Lorcaserin एचसीएल सावधानी
यो सम्झना राम्रो छ कि तपाईंको स्वास्थ्य हेरचाह व्यवसायले यस औषधि लाई निर्धारित गरेको छ किनभने उनीहरूले निर्णय गरेका छन् कि तपाईंले लाभ प्राप्त गर्नुभएका दुष्प्रभावहरूको जोखिम भन्दा उच्च छ। अधिकांश व्यक्तिहरूले यो औषधी लिने गम्भीर साइड इफेक्टहरू देखाउँदैनन्।
लोरस्सरिन लिनु अघि, तपाईंको औषधकार वा डाक्टरलाई थाहा छ कि तपाइँ औषधिमा एलर्जी हुनुहुन्छ कि थाहा हुन्छ; वा चाहे तपाईंसँग कुनै अन्य एलर्जी छ। Lorcaserin निष्क्रिय अवयवहरू समावेश गर्दछ जुन एलर्जी प्रतिक्रियाहरू वा अन्य मुद्दाहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। तपाईंको फार्मासिस्टलाई सोध्नुहोस् तपाईलाई थप विवरण दिन।
यो औषधि लिन अघि आफ्नो औषध चिकित्सक वा डाक्टरलाई तपाईंको मेडिकल ईतिहासको बारेमा सूचित गर्नुहोस्, विशेष गरी गुर्दे समस्याहरू, मधुमेह, लिभर समस्या, हृदय रोगहरू (हृदय ब्लक, हृदय वाल्व रोग, ढिलो हृदयघात, हृदय विफलता सहित) समस्या पुरुषहरूमा दुखद / लामो समयसम्म अस्तित्वहरू (विकृत शिशु सहित, पार्सोने रोगको, एकाइ माइलोमा, बिरामी सेल एनेमिया, लेकिमिया)।
यो भूख suppressant गोली तपाईं आफ्नो सोच वा चक्कर ढिलो गर्न सक्छ। मारिजुआना वा शराबले यी प्रभावहरूलाई अझ खराब बनाउन सक्छ। तपाईं यो सावधानीपूर्वक गर्न सक्षम नभएसम्म मशीनरी प्रयोग नगर्नुहोस्, ड्राइभ गर्नुहोस्, वा केहि पनि गर्न चाहानुहुन्छ जो सतर्कता चाहानुहुन्छ। यदि तपाई मारिजुआना प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अल्कोहल पेयहरू सीमित गर्नुहोस् र तपाईंको डाक्टरसँग कुराकानी गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सर्जिकल प्रक्रिया गुमाउनु भएको छ भने, यो ध्यानाकर्षण छ कि तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण दन्त चिकित्सकहरु (डिप्लोपिक ड्रग्स, हर्बल उत्पादनहरू, र नुस्खा औषधिहरू सहित) बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक वा डाक्टरलाई बताउनुहुन्छ।
यदि तपाईं मधुमेह संग रहन हुनुहुन्छ भने, यो वजन घटाने गोली तपाईंको रक्त शर्करालाई असर गर्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो रक्त शर्करा स्तर नियमित अन्तरालहरूमा जाँच गरी सल्लाहको रूपमा र परिणामहरू डाक्टरसँग साझेदारी गर्नुहोस्। तपाईंको डाक्टरलाई थाहा छ भने तपाईको कम रक्त शर्करा लक्षणहरू छन् भने। तपाईंको स्वास्थ्य हेरविचार पेशेवरले तपाइँको व्यायाम कार्यक्रम, आहार वा मधुमेह औषधि समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ।
यो लागूपदार्थ गर्भावस्थाको बेलामा लिन सकिँदैन किनभने यसले विषाक्त बच्चालाई हानि पुऱ्याउन सक्छ। आफ्नो चिकित्सकलाई विश्वसनीय नियन्त्रणको विश्वसनीय फारमहरूको बारेमा सोध्नुहोस्। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुनुहोस्, तुरुन्तै आफ्नो स्वास्थ्य हेरविचार को बारेमा बताउनुहोस्।
अहिले सम्म, यो थाहा छैन कि यो औषधि स्तन दूधमा पुग्छ कि छैन। शिशु को जोखिम को संभावना को रोकन को लागि, यस दबाइ को उपयोग गर्दा स्तनपान को सिफारिश नहीं गरिन्छ। तपाईंको स्तनपान गर्नु अघि तपाइँले आफ्नो डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस्।
प्रयोगकर्ता जानकारी लेफलेटलाई सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् यदि तपाईंको डाक्टरबाट उपलब्ध तपाईंले लोरस्सरिन प्रयोग गरी सुरु गर्नुभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा तपाइँ भर्फिल हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्न छ भने, तपाईंको फार्मासिस्ट वा डाक्टरलाई सोध्नुहोस्।
तपाईंको फार्मासिस्ट द्वारा निर्देशित रूपमा, प्राय: दुई पल्ट प्रति दिन मार्फत वा बिना बिना मुख द्वारा यो भूख suppressant गोली लिनुहोस्। यो भन्दा धेरै प्राप्त गर्न नियमित रूपमा यो लागू औषधि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंलाई सम्झनको लागि सहयोग गर्न, प्रत्येक दिन एउटै गोलीमा लिनुहोस्।
Lorcaserin एक आदान-प्रदान औषधि हो। खुसी बढाउनुहोस् वा यो गोलीलाई निर्धारित भन्दा बढी पटक लिनुहोस्। तपाईले गरेको अवस्थाले कुनै पनि छिटो सुधार गर्न सक्दैन, र साइड इफेक्टको खतरा बढ्न सक्छ।
गम्भीर औषधि अन्तरक्रियाहरू लिन सकिन्छ जब विशेष औषधि प्रयोग गरिन्छ लोरसेसर गोलीको साथ। तपाईंले हाल प्रयोग गर्नुहुने सबै ड्रगको बारेमा आफ्नो चिकित्सकलाई भन्नुहोस्, र तपाइँले अन्य कुनै नुस्खाको सुरुवात वा प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्।
18 वर्ष भन्दा पुरानो व्यक्तिहरु द्वारा प्रयोग को लागी Lorcaserin वजन घटाने गोली को अनुमोदन गरिएको छैन।
मैले कसरी Lorcaserin एचसीएल पाउडर लिनुपर्छ?
एक विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट चुम्बन नगर्नुहोस्, ब्रेक गर्नुहोस् वा क्रश गर्नुहोस्। केवल यो निलो पार्नुहोस्।
Lorcaserin भूख suppressant एक पूर्ण उपचार कार्यक्रम को एक अंश हो जुन जसमा व्यायाम, वजन नियन्त्रण, आहार समावेश गर्नु पर्छ र तपाईंको रक्त शर्कराको परीक्षण गर्नु पर्छ। तपाईंको औषधि, पोषण र कसरत तालिकाहरू धेरै सख्त रूपमा पछ्याउनुहोस्।
कोठा को तापमान मा दबाउहरु लाई गरम र नमी देखि दूर राख्नुहोस।
सबै बोतलहरूबाट प्रयोग हुने औषधिको मात्राको रेकर्ड राख्नुहोस्। Lorcaserin वजन घटाने गोली दुर्व्यवहार को एक ड्रग हो, र यदि तपाइँ एक नुस्खा बिना बिना अपुचित औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई सधैँ सजग रहनु पर्छ।
अरू कसैसँग लोरस्सिन औषधि कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। एक ठाउँमा औषधि राख्नुहोस् जहाँ कोही पनि यो प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
यदि तपाईले Lorcaserin खुसीको सम्झना गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ?
केवल तुरुन्तै मिस सम्झिएको खुट्टा लिनुहोस्। तपाईले छुटेको खुट्टा छोड्नु पर्दछ यदि अर्को निर्धारित खुराकको समय लगभग छ। मिसिएको खुराकको लागि थप डोज नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं Lorcaserin को ओभरडोज हुन्छ?
1-800-222-1222 मा आपातकालीन चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस् वा जइन्स मद्दत लाइनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लोरस्सरिनमा कत्तिको जोगिनबाट जोगिन सक्छु?
तपाईंको डाक्टरको सल्लाह बिना कुनै पनि अन्य ओभर-द-काउन्टर वा नुहाउने वजन-हानि उत्पादन नदिनुहोस्। साथै, लोरस्सारिन गोली लिँदा चिसो वा खाँदो औषधि नदिनुहोस्।
लोरस्सरिनलाई कस्तो असर पर्न सक्छ?
निम्न औषधीहरूले कसरी लोरस्सिनिन काम गर्दछ भनेर असर गर्न सक्छ:
एक "triptan" जो माइग्रेन सिरदर्द दबाइहरु जस्तै Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, र अन्य।
कुनै पनि प्रकार को एंटीडेन्टेंटेंट
erectile dysfunctiondrugs- लेविट्र्रा, वियाग्रा avanafil, सीआईलिस, sildenafil, tadalafil, र अन्य;
Tryptophan (एल-Tryptophan को रूपमा पनि भनिन्छ);
खाँसी वा चिसो ड्रगहरू जुन dextromethorphan समावेश गर्दछ; वा
दबाइहरु लाई मानसिक बीमारी, मूड या चिंतित विकार को उपचार गर्न को लागी।
उपरोक्त सूची पूर्ण छैन। अन्य औषधिहरूले लोरस्सरिनलाई असर पार्न सक्दछ, र यस सम्भावनाको निर्देशिकामा सबै सम्भावित अन्तरक्रियाहरू सूचीबद्ध छैनन्।
बीबीसीले सुरक्षा र Lorcaserin को क्षमता एचसीएल (सीएएस 616202-92-7) मा दक्षता
Lorcaserin मा धेरै बीबीसी रिपोर्टहरू मात्र दक्षता तर दबाइको सुरक्षा पनि सम्बन्धित छन्। बीबीसीको अनुसार, भर्खरैको अध्ययन एक नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित भएको छ, जसले लोरस्सरिन भूख दमन प्रविधि प्रयोग गरी व्यक्तिको एक्सटेन्सन अवधिमा 8.8lb (4kg) को औसतको रूपमा गुमाएको छ। यस अध्ययनको नतिजा साबित भयो कि लोरस्केसन निस्सन्देह मध्ये एक राम्रो वजन घटाने वाला गोल हो।
रिपोर्ट पनि भन्छन् कि दबाइ रोक्न को लागी औषधिले गर्दा, भूकम्पको उच्च जोखिममा प्रयोगकर्ता नदिनुहोस्। प्रकाशित अध्ययनले 12,000 महिनामा अमेरिकामा एक whopping 40 मोटाइ वा अधिक वजन मा रोगीहरू पछ्याए।
अध्ययनका प्रमुख शोधकर्ताहरू डा। एरिन बोहोलाले भने, तीन वर्षपछि, लोरस्सरिन लिने व्यक्तिहरूले प्लेसबो प्राप्त गरे भन्दा5देखि 10 प्रतिशतको शरीरमा कमी नपाउने भन्दा बढी तीन गुना बढी सम्भव भए।
हृदय वाल्वमा सञ्चालन गरिएका टेस्टहरूले placebo लिने हृदय वाल्वहरूको तुलनामा कुनै महत्त्वपूर्ण मतहरू देखाएनन्। ध्यानमा राख्नु हो कि यो अन्य स्लिमिङ गोल को सुरक्षा को लागी प्राथमिक चिंता भएको छ, लोरस्सरिन सम्भवतया उत्तम वजन घटाने वाला गोली हुन सक्छ।
औषधि लिन वयस्कहरू2मधुमेहको कम जोखिममा पनि थिए। गोलीमा £ 155-225 ($ 220- 290) अमेरिकाको प्रति महिना खुराकको लागत। Lorcaserin आक्रामक वजन घटाने प्रक्रियाहरु जस्तै ग्यास्ट्रिक बैंड शल्यक्रियाको लागि उत्कृष्ट विकल्प प्रदान गर्दछ।
अर्को बीबीसी रिपोर्टले एबरडीनको रोवेट विश्वविद्यालयको शोधकर्ताहरूले अध्ययन गरेका थिए जसले भूखको अनुसन्धान गरे। वैज्ञानिकहरूले भने कि भूटानमा उनीहरूको अनुसन्धानले मस्तिष्कको विशिष्ट भागलाई निम्त्यायो।
उनीहरूले ध्यान दिए कि ती विशिष्ट कक्षहरूलाई दबाइको साथ प्रभावित गरेर उनीहरूले खाना खाईन कम गर्न सक्दथे। लोरस्सेसरले यस तंत्रमा काम गर्दछ, यस अध्ययनको नतिजा न केवल लोरस्केसन जस्तो नयाँ औषधिको लागि ढोका खोलिन्छन् तर यो पनि विशेषज्ञहरुलाई लोरस्सरिनको सुरक्षा र दक्षताबारे विश्वास गर्दछ।
रेटेड 2.335बाहिर
रेटेड 3.405बाहिर